नेकपा बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई भने, '३२ वर्षदेखि अध्यक्ष बन्नु भयो, अझै पुगेन ?' | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७७ साल असार १६ गते, मंगलवार ०८:२२ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पदको लोभ गरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एकल पार्टी अध्यक्ष नदिनुको कारण खोलेका छन् ।
आफूलाई मात्र नेतृत्व चाहिने तर्क गर्नु गलत भएको ओलीले तर्क गरे । उनले भने, '३२ वर्षदेखि अध्यक्ष हुनु भएको छ । अझै पुगेन भनेर गुनासो छ । अन्य नेताले पनि नेतृत्व गर्नु भएको छ । पद नपाउँदा यस्तो अवस्था ?'
मदन जयन्तीको दिन आफूले दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै ओलीले भने, 'हाम्रो बैठकमा भएका कुरा दिल्लीका मिडियामा किन आउँछन् भन्ने हिसाबले मैले के बोलेको थिए, यहाँ साथीहरुलाई बडो चिन्ता लागेछ । भारतको विरोध गरेको यहाँ एजेण्डा भएको छ । नन इस्सुलाई पनि बैठकको इस्सु बनाइयो । यो गलत भयो । यसको पनि छानविन गर्नुपर्छ ।'
नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रियाका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै उनले भने, 'म अहिलेसम्म नेकपाको अध्यक्ष छु । नागरिकले पार्टी दर्ता गर्न पाउने, बन्द गर्न पाउने सबैको अधिकार छ । त्यससँग मेरो के सम्बन्ध छ ? मलाई यो विषय थाहै भएन ।'
बैठकमा छोटो समयमात्र बोलेका ओलीले सरकार जनताको लोकप्रीय बनेको दावी गरेका छन् । जनताको अपेक्षा अनुसार वर्तमान सरकारले काम गरेको र जनताको समृद्धि देख्न नचाने तत्व पार्टीभित्रै भएको उनको भनाइ छ ।